Ministry Relaxes SME Lending Rules | Myanmar Business Today
Home Business Local Ministry Relaxes SME Lending Rules
The Ministry of Planning, Finance and Industry has relaxed SME lending rules to allow small and medium enterprises with only one year’s track record to apply for loans.
Prior to this, only SMEs with two or more years of track record were eligible to apply for loans.
“We are planning to provide loans to one-year-old SMEs. Not to every one of them, but those with great potential for success,” said Daw Aye Aye Win, director general of the Department of Small and Medium Enterprise Development.
When applying for SME loans, small businesses usually have difficulty providing tax receipts as they typically make under K10 million in annual profits and are thus exempt from paying income tax.
The department has lifted the tax document requirement for SMEs with annual profits of up to K10 million.
“Currently, banks require borrowers to provide tax receipts and SMEs request that the Internal Revenue Department issue them,” said Daw Aye Aye Win.
The department is in talks to increase CGI (credit guarantee insurance) loans to SMEs to K100 million from the current K20 million.
The interest rate for SME loans is 13 percent per annum and the same rate applies to USAID CGI loans for agriculture-sector SMEs and Shop Owner loans as well.
SMEs လုပ်ငန်းများအတွက် ချေးငွေလျှောက်ထားခြင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်အချို့ဖြေလျော့
အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းလိုင်စင် သက်တမ်း (၁) နှစ်သာရှိသော်လည်း လုပ်ငန်းတိုး တက်မှုမြန်ဆန်ပြီး အောင်မြင်နိုင်ခြေရှိသည့် လုပ်ငန်းများကို ချေးငွေလျှောက်ထား ခွင့်ပြုလိုက်ကြောင်း စီမံကိန်း ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ သိရသည်။
ယခင်က အသေးစားနှင့် အလတ်များလုပ်ငန်းများ (SMEs ) အနေဖြင့် ချေးငွေလျှောက်ထားလိုပါက SME member သက်တမ်း (၂) နှစ်ရှိမှသာထုတ်ချေးပေးပြီး ယခု သက်တမ်း (၁) နှစ်ဖြင့် ထုတ်ချေးနိုင်ရန် ဖြေလျော့ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
“အခုတော့ ကျွန်မတို့ တစ်နှစ်နဲ့လည်း ချေးပေးဖို့ လုပ်ထားတယ်။ တိုးတက်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေပေါ့။ SME လုပ်ငန်းတိုင်းကို ချေးပေးနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ လက်ရှိအတိုင်းချေးတာမဟုတ်ဘူး။ သူရဲ့ စီးပွားရေးက အောင်မြင်နိုင်မှုရှိလားဆိုတာတွေကို အခြေခံပြီးချေးပေးနေတာပေါ့နော်”ဟု အသေးစား နှင့် အလတ်စား လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချူပ် ဒေါ်အေးအေးဝင်းက ပြောသည်။
ထို့ပြင် SME လုပ်ငန်းများချေးငွေ လျှောက်ထားပါက အခွန်ဆောင်ထားသည့် ပြေစာများတင်ပြပြီး လုပ်ငန်းအသေးများမှာ တစ်နှစ်လုံး အမြတ်ငွေ သိန်း ၁၀၀ မကျော်သည့်အတွက် အခွန်ပြေစာမရှိခြင်း များကြောင့် ချေးငွေမလျှေက်ထားနိုင်သည့် အခက်အခဲများရှိကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိတွင် လုပ်ငန်းအသေးများအနေဖြင့် တစ်နှစ်လုံး အမြတ်ငွေ ကျပ် သိန်း ၁၀၀ မကျော်ပါက အခွန်အထောက်အထားများတင်ပြခြင်းကို ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးလိုက်ကြောင်း သိရသည် ။
“ကျပ် သိန်း ၁၀၀ မြတ်တဲ့သူဆိုရင် အခွန်ဆောင်ရတဲ့ စာရွက်မလိုဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဘဏ်က တောင်းနေတဲ့အတွက် မလိုအပ်ဘဲနဲ့ အခွန်ဌာနကို အခွန်စာရွက်တွေ တောင်းနေတာရှိတယ်” ဒေါ်အေးအေးဝင်းက ပြောသည်။
ယင်းပြင် SME လုပ်ငန်းများအတွက် အပေါင်ပစ္စည်းမဲ့ (CGI) ချေးငွေလျှောက်ထားရာတွင် ယခင်က သိန်း (၂၀၀) အောက်သာ ခွင့်ပြုပေးခဲ့သော်လည်း လက်ရှိတွင် သိန်း (၁၀၀၀) အထိ ထုတ်ချေးပေးရန် ညှိနှိုင်းထားကြောင်း သိရသည်။
“CGI ဆိုလည်း သိန်း ၂၀၀ အောက်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ သိန်း ၁၀၀၀ အထိကို ချေးနေတာ ဘဏ်ပိုင်းကလည်း ချေးလို့ရတဲ့နေရာတွေမှာ ပေါင်းစပ်ပြီးတော့မှ ချေးနေတာတွေပေ့နော်။ ဒါလေးတွေတော့ ဖြေလျော့မှုပိုင်းအနေနဲ့ ဆောင်ရွက်လို့ပြီးပါပြီ” ဟု ဒေါ်အေးအေးဝင်းမှ ထပ်မံပြောကြားသည်။
လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံတွင် SMEs ချေးငွေများကို တစ်နှစ်လျှင်အတိုးနှုန်း ၁၃ ရာခိုင်နှုန်း၊
လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍအတွင်းရှိ SME လုပ်ငန်းများအတွက် USAID CGIချေးငွေဖြင့် ၁၃ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ဈေးဆိုင်၊ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အတွင်းရှိဆိုင်ခန်းများဖြင့် ရောင်းချသော ဈေးဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်များ အတွက် SHOP OWNER ချေးငွေဖြင့် ၁၃ရာခိုင်နှုန်းအသီးသီးဖြင့် ပြည်တွင်းပုဂ္ဂလိကဘဏ်များမှ ထုတ်ချေးပေးနေကြောင်း သိရသည်။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရန်အတွက် Working Capital ချေးငွေဖြင့်အတိုးနှုန်း ၁၂ ရာခိုင်နှုန်း JICAမှ ၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ချေးပေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
Previous articleAIA, AFG Team Up to Sponsor Myanmar National League
Next articleThird Big Bad Wolf Sale in Myanmar Slated for January